I-Watercolor tattoo - I-Bestcolor tattoos yamadoda nabesifazane
I-Watercolor Tattoo Design Imibono yabesilisa nabesifazane
i-sonitattoo January 3, 2017
Okushiwo ama-tattoo we-watercolor
Njengoba ubuhle obuhle, lezi zakhiwo zifanekisela izincazelo ezithinta ngokufanayo. I-tattoo ingabonakalisa inkumbulo, ukucabangela inkolelo yomuntu, ukubonakaliswa kothando lwethu kulabo abadlulile noma nje uhlobo lwezithombe. Ifomu elivame kakhulu lemidwebo yamanzi i-watercolor yilezi izinyoni nezinambuzane.
Ama-tattoo e-Butterfly ekhombisa ukuphila, ithemba, ukuguqula umzimba nokuvuselelwa kabusha kuvame ukusetshenziswa. Ama-tattoos ama-watercolor afana ne-rose aveza uthando nobuhle kuyilapho i-lotus ibonisa ukuhlanzeka. Enye yezithombe ezivame ukuvuna izimbali ziyi-daffodil eqhutshwa umoya, okufanekisela ukuvumela ukuhamba kwezimpilo nokuhlupheka.
Ubuciko obunqunu buvamile futhi bunamathekisthi abonayo. Ukuvala nokuhlunga kwemibala kubonisa umuzwa womuntu, imicabango noma umbono. Ukushicilelwa kwemiklamo ehlukene kuhunyushwa ngokuhlukile ngababukeli.
I-Watercolor Tattoo Design Yabesifazane
I-Watercolor emuva imibala yamantombazane
Umbala wamanzi uphendule imibala yamantombazane
I-Watercolor yezandla zomzimba zamantombazane - Ingxenye 1
Amanothi emidwebo yamanzi amantombazane - Ingxenye 2
Amathrekhi omlenze wamanzi we-Watercolor wabesifazane
Imidwebo yamathanga yamanzi yamanzi kwabesifazane
Ama-tattoos ohlangothini lwe-Watercolor yamantombazane
Umbala wamanzi emuva ehlombe ama-tattoos amantombazane
Ama-tattoos amahlombe e-Watercolor amantombazane
Amathrekhi embala wamanzi amantombazane
Umbala wamanzi emaphethweni ehlombe lamantombazane
Ama-tattoo we-Watercolor Arm abesifazane
Amathrekhi wezandla ze-Watercolor yamadoda
Umbala wamanzi ubeke ama-tattoo kubantu
Ama-tattoos emilenze yamanzi e-Watercolor yamadoda
Imidwebo yeminwe yamanzi yamanzi kubantu
Hlanganisa i-tattoo yamanzi yamadoda
Ukubekwa kahle kwama-tattoo we-watercolor
Isikhundla sokubekwa kwe-watercolor tattoo kubalulekile njengokukhetha umklamo oqondile. Indawo yokuba nomdwebo incike ngobukhulu be-tattoo. Ama-Tattoos amakhulu kakhulu abukeka kahle uma efakwa ezindaweni ezinkulu ezinjenge-back, isisu, umlenze, imilenze kanye nehlombe, kanti ama-tattoo amancane afanelekile ezindaweni ezincane ezinjengama-ankle, ama-wrists, umgogodla, emuva kwendlebe ngisho naseminwe.
Abanye abantu banezimingcele zenhlalo nezomsebenzi ekutholeni inkinobho. Kubantu abaningi balolu hlobo, ama-tattoos ezindaweni ezingahle zimbozwe kalula zingcono njenge-torso, indawo ye-hip.
Ama-tattoos e-watercolor aphelelwe amandla ngokushesha uma ukunakekelwa okufanele kungathathwa. Lokhu kusho ukuthi ukugcina kuvikelwe ekukhanyeni kwelanga futhi ukuthola ukuthinta uma kunesidingo kubalulekile. I-Watercolor tattoos ibukeka kahle kunesikhumba esikhanyayo njengoba isimo se-inkinobho ye-tattoo siba sobala nakakhulu kulesi sitayela sokudweba. Kungcono ukukhetha indawo ehlanganisiwe noma enganqunywanga ukudweba imibala.
Amathiphu okulungiselela ukuthola tattoo
Zimbalwa izinto okumelwe zikhunjulwe ngaphambi kokuthola tattoo yizi:
Ukudla isidlo esifanele ngaphambi kokuya ukudweba imibala njenge umzimba udinga amandla ukuphulukisa umonakalo we-tattoo futhi nokuvimbela ukulambalala lapho ama-tattooing sessions ehlala isikhathi eside. Zigcine uzigcinile isikhathi sonke.
Gqoka izingubo ezikhululekile ukususa noma ukudonsa ngokuya endaweni okuzobhalwa ngayo.
Yilungele konke okudingekayo ngemuva kokudinga ukuthungwa okufana nokugcoba okunama-antibacterial noma i-gauze. Kungcono ukubuza ngaphambili umdwebi we-tattoo mayelana nakho konke okudingekayo ukuthengwa.
Izinhlobo zamathambo we-watercolor
I-Watercolor tattoos ifomu eliyingqayizivele lemidwebo ye-tattoo eyakhiwe kusuka kumabhuloki kanye nemifino yemibala. Ukuhlanganiswa kwemibala esetshenziswayo kwenza kube mnandi kakhulu. Njengoba kunezindlela eziningi ezihlukahlukene ezitholakalayo, ukuphinda ukuhlukanisa ngezigaba kuyinselele. Izinhlobo eziyinhloko ezimbili ezihlukene zihlukaniswa ngokusekelwe kokutholakala kwesisekelo sangasemuva.
I-Watercolor Tattoos ngaphandle kwe-Black base -
I-Watercolor tattoos ngaphandle kwesisekelo esimnyama iboniswa njenge-tattoo design ngaphandle komdwebo omnyama noma umsebenzi welayini. Ukukhiqiza ama-tattoos ebukeka njengemidwebo ye-watercolor. Lezi zinhlobo ze-tattoos ziye zaphelela emaphethelweni afana nokuhlangana ngesikhumba futhi kunzima ukuhlukanisa. Ikakhulu lithembele kumbala ogqamile wedizayini ukwenza kube okukhangayo nakakhulu.
I-Watercolor Tattoos enesisekelo esimnyama
Ama-tattoos e-Watercolor enesisekelo esimnyama afakwa ngomsebenzi othile we-line. Umbala wenziwa ngalezi zindlela zomsebenzi. Umsebenzi womugqa wesigxathu unikeza umphumela ohluke kakhulu oqhathanisa nalabo abangenasisekelo esimnyama. Abaningi bama-tattoo bagcina isisekelo samnyama ngezizathu ezimbili. Isizathu sokuqala yikhono lomsundu omnyama ukuya eminyakeni yobudala kancane futhi yesibili ukungabi nolwazi lomdwebi wezinwele ekuhambiseni imiklamo ngaphandle kwemingcele emnyama.
I-Watercolor ethandwa kakhulu i-Tattoo imiklamo
I-Floral Watercolor tattoos- Ama-tattoos ama-floral ama-floral athandwa kakhulu njengoba efika ngemibala enamandla nezimo. Ama-tattoos ajwayelekile kakhulu adalwa yi-roses, i-lotus, i-sunflower, i-daffodils, i-tulips, i-cherry nezimbali. Lezi zenziwa njengezimbali ezilodwa noma e-bunch ezinika ukubukeka okumangalisayo.
I-Butterfly watercolor tattoos- I-Butterflies ilungele ukusetshenziselwa njengobuciko be-tattoo yamanzi njengalezi zinhlobo ezibonakalayo zombala obheka ubuciko ngokuphelele. I-tattooist ingahlanganisa imibala eminingi futhi athuthukise amaphethini wombala ohlukile.
Ama-feather watercolor tattoos- I-feather watercolor tattoos ibukeka ithandeka emzimbeni wesithwala njengoba inomusa omuhle ogelezayo futhi okhangayo. Inhlanganisela yemibala eminingi enezingxenyana eziqhamukayo inikeza ukubukeka kwangempela.
Ama-tattoo we-Wolf- I-Wolf watercolor tattoos ingenye imiklamo ethandwayo ethandwa abaningi. Ngokungafani nemidwebo yama-classic yezilusi, ama-watercolor tattoos anganikeza umphumela onjengobuchopho ekwakheni okwenza kube mnandi kubabukeli.
Ama-tattoos e-fishcolor- I-Fish tattoo ingenye ye-tattoo design ethandwayo njengoba inekhwalithi egelezayo. Ukubonisa inhlanzi yezinhlanzi emanzini ngempumelelo kubonakala ngokusetshenziswa kwembala ekhanyayo kanye ne-splashes.
I-Hummingbird watercolor tattoos- Ama-tattoo ama-Hummingbird ayinto enhle yokudala njengoba ivule amaphiko ayo ngesivinini esiphezulu, inikeze umthelela ovuthiwe ekuhambeni kwayo futhi kulula ukwenza umdwebo we-tattoo watercolor.
Izindlela zokuvimbela ukuqubuka okusheshayo kwama-tattoo we-watercolor
I-Watercolor tattoos ijwayele ukuqhathaniswa nokuqhathaniswa nama-tattoos yendabuko. Ukusetshenziswa kombala okhanyayo kuma-tattoos kunezela ekuhluphekeni kokukhula ngokushesha. I-Watercolor tattoos yobudala kancane kancane lapho ukugcinwa okufanele kuqinisekiswe. Lokhu kuhlanganisa:
Khetha umculi olungile - Umculi onolwazi oluningi kulolu hlobo lwesitayela kuzokuqinisekisa ukuthi tattoo yenziwe ngamasu okuvimbela ukukhula kwawo okusheshayo. Njalo khetha i-tattooist ngokuhlakanipha ngokucela ukuba banikeze amasampula omsebenzi wabo wangaphambilini. Umculi we-Tattooist ongeyena ongakwazi ukwenza amathrekhi we-watercolor njengoba kudinga ukuthinta okuthile nokubukeka kobuciko.
Gcina kude nelanga - I-Sunlight inezimpikiswano ezimbi ngokulinganayo kumathambo ezindala kanye namathambo amasha. Ukwehliswa kwesikhumba njalo kukhanya kwelanga kuzoholela ekufipheni ngokushesha. Ukusetshenziswa kwamandla we-sun screen high amandla okuvimbela ukusebenza kwelanga kusuka tattoo yakho kunconywa kakhulu. Ukumboza ama-tattoos ngokugqoka ngokuhambisana nakho kuzosiza ekuvimbeleni ukukhula.
Gcina isikhumba siphelile - Ubuhle be-tattoo bungakwazi ukuhlala isikhathi eside uma isikhumba esakhiwa kuso sinempilo. Ukudla okunomsoco, ukulala ngokwanele nokulala ngokwanele kudlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukukhanya kwe-tattoo
I-Moisturize - I-moisturizer ehlanza amanzi iyadingeka ekuvimbeleni ukugoqa, ukugwinya nokufa ngaphandle kwesikhumba futhi ugcine kahle kahle. Ukusetshenziswa kwekhwalithi elimnandi lekhwalithi elimnandi lesikhumba kuzosiza ekuphulukiseni okusheshayo kwe-tattoo nokuvimbela ukuqhuma.
Vimbela ukuRubbing - I-Tattoos ezindaweni ezijwayele ukuxubha njalo kuzoholela ekutheni ama-tattoos afinyelele ngokushesha. Kunconywa ukuvimbela ukubeka izithombe eziphezulu ezinyaweni zakho noma ematheni.
Ama-tattoos e-Watercolor akwenziwa ngaphandle kwemiklamo efanele uma kuqhathaniswa namathrekhi wendabuko adinga uhlaka olufanele ne-shades. I-Watercolor tattoos inikeza abaculi inkululeko yokuthuthukisa imiklamo eyingqayizivele ngezimpawu zombala. I-Watercolor tattoos yayo yonke imiklamo ingahle ifakwe, umdwebi we-tattoo unamakhono ochwepheshe emanzini e-tattooing.
Tags:ama-Tattoos amantombazane ama-tattoo kubantu umdwebo we-watercolor
imidwebo yamasleetattoos zomqheleama-tattoos amajubaflower tattoosbird tattoosi-compass tattooama-sun tattoosimisindo yezintamboukudubula izithombeumdwebo wezindlovutattoo isoizithombe zezinyangaabangani bomngane abangcono kakhuluidayimani tattooimibhangqwana emibhangqwanaamathumbu esifubai-henna tattooI-Feather Tattootattoos eagletattoos udadeizinyawo zamathamboama-tattooimibono ye-tattooTattoos yama-Ankleamathrekhi we-butterflyizithombe ze-dreamcatcherrose tattoosi-cherry ehlobisa i-tattooizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezii-peacock tattooi-semicolon tattooama-tattoos engaloizithombe zezingonyamaukubuyisa izithombeizithombe zezinhlangadesign mehndiama-tattoo kubantutattoo engapheliangel tattooslotus flower tattoongesandla izidakamizwaama-cat tattoosama-Tattoos amantombazaneI-Heart Tattoosizithombe ze-skullama-tattoo amahangedragon tattootattoos cuteumdwebo we-watercolorumdwebo womcibisholo